“Bal eeg inta lacag ay qarashgareeyeen walina ma aysan ku guuleysan Champions League” _ Ronaldo oo dhulka ku jiiday Barcelona – Gool FM
“Bal eeg inta lacag ay qarashgareeyeen walina ma aysan ku guuleysan Champions League” _ Ronaldo oo dhulka ku jiiday Barcelona
(Yurub) 30 Luulyo 2019. Xiddiga reer Portugal iyo kooxda Juventus Cristiano Ronaldo ayaa sheegay in Barcelona ay qarash badan ku bixisay suuqa kala iibsiga 5-tii sano ee lasoo dhaafay, balse ay ku guuldarreysteen inay qaadaan tartanka Champions League.
Dhinaca kale Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in kooxdiisii hore ee Real Madrid ay soo bandhigi doonto xili ciyaareed wanaagsan.
Kooxda Barcelona ayaan ku fashilantay inay ku guuleysato tartanka Champions League tan iyo sanadkii 2015, inkastoo ay sameeyeen heshiisyo xoogan ee qaali ah.
Cristiano Ronaldo ayaa si dadban ugu jees jeesay xaalada kooxda Barcelona ee ah inay ku fashilantay ku guuleysiga Champions League tan iyo 2015-kii, wuxuuna hadalkiisan imaanayaa wareysi dheer oo uu siiyay wargeyska Isbaanishka ah ee “Marca” kaddib markii shalay loogu caleymo saaray abaal-marinta “MARCA Legend” caasimadda Spain ee Madrid.
Ronaldo ayaa ugu horeyn ka hadlay kaddib markii la weydiiyay su’aal ah in xili ciyaareedka cusub ay ku guuleysan karto kooxda Juventus tartanka Champions League wuxuuna ku jawaabay:
“Had iyo jeer wuxuu noqon doonaa sanadka kooxaha Juventus, Real Madrid iyo Barcelona, sababtoo ah tartanka sida Champions League hal koox oo kaliya ayaa ku guuleysan karta”.
“Waxaan ku siin doonaa tusaale, kooxda Barcelona waxay qarash badan ku bixisay shantii sano ee la soo dhaafay inay la soo wareegaan ciyaartoy waa weyn, laakiin ugu dambeyntii kuma aysan guuleysan Champions League, inaad ku guuleysato Champions League kuma xirna in sidaas la sameeyo”.
“Juventus si wanaagsan ayaa loo xoojiyay xagaagan waxayna xaqiiqdi u dagaalami doontaa guul, sida had iyo jeer xilli ciyaareed kasta, laakiin waa inaan ku mashquulin ku guuleysiga Champions League, sababtoo ah hadii aan Juve loo caleemo saarin xili ciyaareedkan, waxaa loo caleemo saari doonaa marka xigta, ama laba xili ciyaareed kaddib, waxa ugu muhiimsan waa sida aan u shaqeyn doonno”.
“Barça waxay sameyneysaa koox adag sida xilli ciyaareed kasta, waxaana markale u arkaa inay tahay koox aad u xoog badan, waxay sameysay heshiisyada Griezmann iyo Frenkie de Jong, si la mid ah sanadkii hore oo kale oo ay sameeyeen saxiixyada Ousmane Dembélé iyo Coutinho, dabcan waxay sii ahaan doontaa mid ka mid ah kooxaha ugu fiican addunka”.
“Si la mid ah Real Madrid, waxay sameysay heshiisyo ay ka mid yihiin Eden Hazard, Luka Jović iyo kuwo kale ee muhiim ah, laakiin aqoonta aan u leeyahay kooxda Madrid, sababtoo ah waa kooxdii aan kula soo guuleystay waxyaabo badan, waxaan hubaa 100% inay soo bandhigi doonaan xili ciyaareed cajiib ah”.
RASMI: PSG oo dhameystirtay heshiiska mid ka mid ah xiddigaha ka xamaasha horyaalka Premier League